> Resource> iPhone> otú nyefee iPhone Ndi ana-akpo ka vCard
Dị ka ọkọlọtọ faịlụ Ọkpụkpọ maka electronic kaadị azụmahịa, vCard bụ nnọọ uru. Ọ bụrụ na ị nyefee iPhone kọntaktị na vCard, ị nwere ike mfe bulite vCard faịlụ gị Gmail, Outlook, Yahoo mail na ndị ọzọ. Otu ụbọchị, ma ọ bụrụ na ị ga-esi ọhụrụ iPhone, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị hapụ kọntaktị site accidently, ị nwere ike ngwa ngwa-esi na ha azụ site importing vCard faịlụ gị iPhone. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ idetuo iPhone kọntaktị na VCF, ị na-nri ebe. Lee, m ga-eso gị ụzọ abụọ mezue ọrụ.
Nkebi nke 1: Export iPhone kọntaktị na VCF Mfe
Nkebi nke 2: Nyefee iPhone kọntaktị na vCard na na gị iPhoned
Part 1. Export iPhone kọntaktị na VCF Mfe
Mbupụ kọntaktị site na iPhone ka VCF, i kwesịrị a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo. Nke a vasatail omume na-enye gị ka ị na mbupụ otu n'usoro nke kọntaktị n'ime vCard faịlụ na mfe nzọụkwụ. Ugbu a pịa bọtịnụ n'okpuru ibudata a usoro na kọmputa gị
Mgbe nbudata a usoro, ị kwesịrị ị na wụnye na-agba ya. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone gị na kọmputa. Mgbe ahụ, a usoro ga-chọpụta gị iPhone ozugbo. Mgbe ahụ, gị iPhone ga-emere ke akpan window.
Cheta na: Biko wụnye iTunes na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Copy iPhone kọntaktị na vCard
Na-ekpe kọlụm, pịa "Ndi ana-akpo". Mgbe kọntaktị niile na-egosipụta na n'akụkụ aka nri, họrọ gị chọrọ kọntaktị. Wee pịa "Export ka". Na ya ndọpụta ndepụta, họrọ "Export kọntaktị ahọrọ na kọmputa" ma ọ bụrụ nnọọ na ị chọrọ mbupụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na i bu n'obi na mbupụ niile, pịa "mbupụ kọntaktị niile na kọmputa." Na esiri-ala ndepụta, pịa "vCard faịlụ".
Mgbe ahụ, faịlụ nchọgharị windo na-egosi. Chọta a ọnọdụ na kọmputa gị ịzọpụta exported vCard faịlụ. Mgbe ahụ, a usoro amalite exporting vCard faịlụ. Ihe i kwesịrị ntị bụ ịnọgide gị iPhone ejikọrọ n'oge ebupụ usoro. Ọfọn, na ọ bụ ya! Nzọụkwụ ndị dị mfe, na-adịghị na ha?
Part 2. Nyefee iPhone kọntaktị na vCard na na gị iPhone
Iji nyefee kọntaktị site na iPhone ka vCard, ị pụrụ ime ya na otú a. Tụgharịa na gị iPhone. Enweta "Ndi ana-akpo". Pịgharịa gaa na ala na ndetu kọntaktị ịchọta kọntaktị ị chọrọ mbupụ. Pịa gị chọrọ kọntaktị. Mgbe ahụ, ya nkọwa ga-gosiri. Pịa "Share Kpọtụrụ" wee pịa "Email". Mgbe ahụ, jupụta na adreesị email gị, dị ka Gmail. Mgbe ahụ-eziga ya. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike abanye gị Gmail akaụntụ na mbupụ na vCard faịlụ gị na kọmputa.
Ụzọ abụọ dị. Ma nke abụọ na otu onye bụ a bit mgbagwoju. Ọ na-ekwe ka ị nyefee otu kọntaktị na oge. E wezụga na, ọ pụrụ nanị enyere gị aka nyefee vCard faịlụ gị Email, ọ bụghị gị PC. Kama nke ahụ, onye mbụ nwere ike ka ị nyefee kọntaktị niile ka vCard faịlụ na oge. Na ọ zọpụta vCard faịlụ na kọmputa gị. N'ihi ya, ọ bụ n'ezie adaba.
Otú nyefee kọntaktị na iPhone gụnyere VCF na ekwentị